Hiran State - News: Breaking News:- M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo saacad ka hor gaaray magaalda Dubai.
Breaking News:- M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo saacad ka hor gaaray magaalda Dubai.
HS:-M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo saacad ka hor gaaray magaalada Dubai, halkasina siweyn loogu soo dhaweyey.
Professor Ahmed Muumin Warfaa oo ah musharax ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada soo socota ahna musharaxa loo badinayo inuu ku guuleysan doono madaxtinimada Somaliya ayaa safar aan la cayimin inta uu qaadan doono ku tagay caawa magaalada Dubai xili halkaasi loogu soo dhaweeyey si aan horey loo maqal.
M/weynaha Mustaqbalka oo ay diyaaradii siday soo caga dhigatay 11:30pm xiliga Dubai ayaa waxaa garoonka ku sugayey aqriyaar ku howlaneyd soo dhaweyntiisa bilaaw iyo dhamadna safarkiisa la socday. waxaana halkaas looga qaaday gaari loogu tago galay madaxda iyadoona ay dhinacyada ka socdeen ilaa dhawr gaari oo kale.
Professor Warfaa ayaa waxaa isla markiiba loo galbiyey Hotel weyn oo ka mid ah Hotelada bariga dhexe caanka ka ah lana yiraahdo Rayhaan Hotels and Resourt oo ku yaala goobaha loogu tago galay...........
Hadaba sidaan horey ugu balan qadnay shacabka Somaliyeed muwaadinkasta oo doonaya inuu xiriir la sameeyo madaxweynaha mustaqbalka waxuu kala xariiri karaa telefonada hoos ku qoran. arintaan ayaan ugu talo galnay in aysan dhicin madaxweyne danbe oo Somaliyeed oo ay bulshada ku adkaato qaabkii ay ula xariiri lahaayeren, waayo masuulka u tartamayo hogaanka dal bur bursanaa mudo oo Somaliya oo kale ah hadii shacabka loo fududeeyo qaabkii ay ula xariiri lahayeen si baahidooda ugu sheegtan amaba talo wax ku ool ah u siiyaan, waxa dhici karta in uu masuulkaasi helo talooyin kala duwan oo ka kala imaanayo qeybaha kala duwan ee bulshada siiba dadka dan yarta ah oo iyagu laga yaabo in talooyinkooda ku cabiraan qaab wanagsan iyagoo ka turjumayo dhibaatada markaasi iyaga heysata, sidoo kale waxey tani sahleysaa in bulshadu u sinaato madaxweynaha mustaqbalka maadama lagu tuhmayo cadalad waxaa meesha ka baxeysa in koox yar amaba qabiil goyni ah isku gedaamo hogaamiye dhan oo ay bulsho dhawr iyo toban milyan ah ka sugayaan xal iyo isbedel, sidaasina dalka ku lumiyo fursado iyo talooyin badan oo wax ku ool ahaa oo ay soo gudbin lahaayeen muwadiniin Somaliyeed oo daacad ah wadaniyadana ku dheer tahay.
Inta badan hogaamiyashii Somaliya soo maray waxa laga yabaa ineysan xumeyn laakinse isku gedaamen koox markaasi isakugu jrtay shaqsiyaad ama qaar ka mid ah beesha uu markaasi hogaamiyaha hadaba jira ka soo jeedo.
Hadaba ololaha madaxweynaha mustaqbalka wuu ka kedisan yahay ololahii horey ay u arki jireen Somalida iyo wadamada Africa qaarkood, si aad u barato hogaamiyaha berito ku hogaamin doono yaan lagaaga sheegeyn ee hada iska baro. hadii aad tahay muwaadin Somaliyeed waxaad madaxweynaha mustaqbalka mudada uu joogo Dubai kala xariiri kartaan.
La soco wararkeena danbe iyo hadba sida uu wariyaheenu u helo xog rasmi ah, maadama goobaha qaarkood ay adag tahay sida laga daremayey qaabkii caawa loogu soo dhawyey garoonka diyaaradaha iyo sida waxkasta ugu muuqdeen safar laga sii shaqeeyey.
Rayhaan Hotels and Resort
· admin on November 05 2011 00:52:35 · 0 Comments · 2079 Reads ·
14,585,576 unique visits